BAD IIBIN & BURCAD SAXIIX JECEL
Qoraal: Qalin Qaran Ku Difaaca:
WQ: CAANAGEEL | Email: caanageel@hotmail.co.uk
Qormadan qalin qaran ku difaaca ah, halqabsi uga dhigi maayo hal abuurkii YamYam ee ahaa "halgankiyo midnimadiyo raggii calanka soo mudey aan baroorane maye" waayo 20kii sano ee u danbaysay sinjiga Somaalidu qayladhaan buu ku jirey, dhihina maayo hal abuurkii Qaasim ee ahaa "isma doorin gaalkaan diriyo daarta kii galaye" waayo go'aanka 13 May markuu soo baxay ayaa hadalkani dhihid leeyahay waxaanse murtida xaalada ku habooni tahay meeshii abwaanka reer Jabuuti Ibraahim Garle ka yiri "sedka adiga kuu yaal sun miyaa la mariyaa". Haba tag-yaraatee xukuumad Somaaliyeed waxaa laga rejeynaayey inay dib u soo nooleyso qadiyaddii xoreynta Somaali Galbeed & NFD balse waxaa ayaandarro weyn ah maanta in lagu muransan yahay jiritaanka jamhuuriyadda Somaaliya (bad & birriba). Kooxda Shariifeyn heshiiska ay badda ugu hibeysay Kenya ma qiyaano qaran baa? mise waa xilkas-darro cuskan faro dufan leh baa wax duuga?
Tuhunka hareeyey heshiiska lala galay Kenya waxaa ugu culus iyadoo aan si cad loo qeexin calaamadinta qalfoofka & kala sareynta badda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya. Erayga (Continental shelves) oo ah af qalaad loo adeegsado badaha ayaa heshiis dhagareedka hadoodilan loo beddelay "Labada dal ee xeebta leh". Arrinta calaamadintaas xadka badda ee aan la xallin ee u dhaxeeya labada dal ee xeebta leh waxaa loo tixgalinayaa "MURAN BADEED" sida heshiiska lagu xusay.
Sheegashada labada dal ee Xeebta leh Kenya & Somaaliya waxay muujinaysaa aag is dulsaaran, yacni isku meel ayaa u cabbiran labada dal oo ah qalfoofka qaaradda taas oo ah "Aagga lagu muransan yahay."
Tan kowaad ma jirto meel ay heshiis ku saabsan badaha ay ku kala saxiixdeen Kenya iyo Somaaliya 49kii sano ee aan xorta ahayn, taas beddelkeeda Somaaliya waxay meel marisay sharciga badaha ee loo yaqaan (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) 24 Agoosto 1989 kali ah oo ay iyadu iskeed u gudbisay iyadoo wax heshiis ah lala gelin Kenya ama dal kale ee xuduud badeed la leh Somaaliya. Heshiiskaas markii labada dal ay u gudbiyeen QM midkoona dood ama muran kama keenin go'aanka UNCLOS.
Haddii labada dal muran dhinaca xuduuda badaha ahi dhexmaro waxaa kala xadeeya soohdinta badda ee labada dal aqoonyahanno ku xeeldheer xeerarka badaha oo labada dal u dhashay. Haddii ay ku heshiin waayaan, waxaa lagu kala baxaa Maxkamadaha caalamka hortooda. Tusaala ahaan (a)Tunisia iyo Libya mar ay isku qabteen soohdin badeed, waxaa kala saaray Maxmadda loo yaqaan (International Court of Justice "ICJ" Judgement of 24 February 1982). (b) Libya iyo Malta waxaa kala saaray isla (ICJ Judgement of 3 June 1985) iyadoo halbeegga wax lagu cabbirayo yahay soohdinta labada dal.
Bal aan dhan kale ka eegno arrinta heshiiska Nairobi, ilaa hadda ma jirto meel Soomaaliya ay uga tanaasushay dhulka NFD, haddase isafgaradkaani (Memorandum of Understanding) waxuu muran galinaya ama 13 May kadib u xalaalayna Kenya dhul badeed Somaaliyeed, iyadoo dowladii xuduuda badda qaadata ayaa tan dhulkana ku darsan. Shirqoolka qiyaano qaran ee badda lagu iibiyey waxaa kashifay, madashii saxiixa heshiiska dhanka Kenya wafdi ballaaran oo ka kooban (wasiiro & aqoonyahanno) balse dhanka Somaaliya waxaa metelayey wasiirka C/raxmaan C/shukuur Warsame qorsheynta iyo shandadiisa tiiyoo Faarax Macalin gudoomiye ku xigeenka baarlamanka Kenya wareysi uu siiyey VOA uu ku yiri munaasabadda saxiixu maalinta ay dhacaysay ka hor todobaad ayaa heshiiska la saxiixay.
22/10/1962 Ingiriisku wuxuu u xilsaaray guddi xal ka soo gaara mushkiladda gobolka NFD. Shacabka ku nool NFD waxaa laga qaaday afti, waxayna cod aqlabiyad ah 80% ku doorteen inay la midoobaan Jamhuriyadda Somaaliya. Somaalida oo rejo yar ka qabtay Ingiriisku inuu mar uun ka soo dabco dhagarta Somaalida, ayaa 08/03/1963 Mr. Ducan Sandys Xoghayihii Isticmaarka wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay NFD inay ka mid tahay Keenya, halkaasna waxaa loogu ood-jiiday rejadii laga qabay midaynta Somaaliweyn. Somaaliya oo ka carootay gaboodfalka iyo qiyaamada Ingiriiska, 18/03/1963 waxay xiriirka u jartay Ingiriiska.
Superpower diplomacy in the Horn of Africa By Samuel M. Makinda (1987)
28/10/1967kii Ra'iisul Wasaare M.I. Cigaal ayaa Caruusha (Tanzania)* ku saxiixay heshiis is afgarad ah oo dalalka Kenya iyo Itoobiya kaasoo qorayey in la joojiyo hubaynt jabhada u diriraya xornimada NFD iyo Somaali galbeed isafgarakaasi waxuu kaloo dhigayey inaan wax dacaayad ah idaacahada laga sii deyn waxaan taariikhdan u xusay in is afgaradka xukuumadan Shariifku saxiixday uu si dadban ugu ansixiyey dhulkii NFD Kenya.
Maadama dal waliba iskiis u gudubsan karay heshiiska arrinta la iswaydiinaya waxay tahay danta Kenya ka leedahay heshiiskan iyo tan xukuumada Shariif ka leedahay. Aniga waxay ila tahay ka sokow war suuqeedka oranaya Kenya inay rabto inay shidaal ka qodo badda maanta loo hibeeyey, waxaana war suuqeedkaas xoojinaya joogintaanka ay madasha saxiixa joogeen ergo ka socotay dalka Norway.
DAILY NATION, Kenya, oo soo bandhigay in Soomaaliya loo qaybin doona Itoobiya iyo Kenya oo uu qoray Mr Donald Kipkorir ... Akhri...
Dhan ka kale in ay jirto shirqool fog oo dhulkii jamhuuriyada Somaaliya lagu qaybsanayo oo ay Kenya qayb ka tahay waxaa kashifay Mr Donald Kipkorir oo ah aqoonyahan reer Kenya ayaa 03/10/2008 wargayska Daily Nation ku qoray (Somaaliya ha lagu kala daro Kenya iyo Itoobiya) Kooxda Shariif iyagu dano dhaqaale oo ay ugu horreyso canshuur baa naloo aruurinta ay yiraahdeen baa ujeedkoodu yahay.
Dhinaca sharciga 13 May haddii taako ka mid ah badda Soomaaliya loo xukmiyo Kenya xukuumada shariif waa dhacaysaa waxayna ku sifoobi qiyaano qaran. Maahmaah Somaaliyeed baa ahayd meeshi walaalka ratigu ugu dheelliyo adna waa kaaga dheellin, taasoo macnaheedu yahay xukuumadda Sheekh Shariif waxa uu raacaysaa wadadii Cali Mahdi. Sida ku qoran wargeyska (The Horn of Africa Bulletin Volume 4 no 5 soona baxay Sept-October 1992) heshiis lagu qeexay suntan Nukliyeerka iyo haraadiga wasakhda warshadaha in lagu aaso geyiga Somaaliya bad & birriba ayaa Cali Mahdi la saxiixday shirkadda (Archer & Partners) oo ay leeyihiin Maafiyo Swiss & Talyaani ah, goobtii saxiixa waxaa Cali Mahdi la siiyey $3 million. Markale heshiiska tixraaciisu yahay Jx/xm/4-189 ee soo baxay 19/08/1996 oo Cali Mahdi saxiixay heshiis badda Somaaliya u fasaxaya in sunta warshadaha lagu shubo kaasoo uu u saxiixay qandaraasle Talyaani ah oo la yiraa Professor Ezio Scaglione in uu Hirgeliyo Mashruucan inkastoo Cali Mahdi heshiiskan beeniyey haddana suntii badda lagu shubay dhulgariirkii badda ee Sunaami baa marqaati furay oo suntii bannaanka ayeey u soo baxday waxaase sun ka daran qeyb baddii ka mid ah in loo hibeeyo Kenya.
Sheekh Kashka oo ka hadlayey heshiiskii Anwar Asadat la saxiixday Isreal 17/9/1978kii (Camp Devid agreement) waxuu yiri "Masar oo 7kun oo sano xadarad ah leh oo ka soo jeeda Faraaciintii inay Yahuud oo fitnadooda Alle noo sheegay heshiis la saxiixato waxay muujinaysa Anwar inuu ka liito xitaa Siyaad Barre oo madaxweyne u ah shacab aan xadaarad lahayn oo diiday inuu Yahuud heshiis la saxiixdo, maanta sow ma dhihi karno heshiiskan dhul badeed dhan 38,000 km2 lagu siinayo waxuu ka shiddo badan yahay maalintii 12/06/2006 ee Baarlamaan ku sheeggu saxiixay in ciidammda Itoobiya Somaaliya soo galaan.
Badda qaybtan warkeedu cadaan doono 13 May ka sakoow intii kale waxay gacan ugu jirtaa shisheeye u horkacayo Mareykanku oo ugu duur xulay inay la dagaalayan burcad badeed balse runtu tahay inay iyagu qabsadeen eeg warbixinta NewsWeek qortay ee ay soo xigatay laanta afka Soomaaliga ee BBC maalintii isniinta waxay ku jira saddex qodob oo halis tan hore in aduun dhan saddex boqol oo milyan oo dollar sanad kasta kaluumaysatada ajnabigu ay ka qaatan Soomaliya badeeda , tan labaad oo ah in 1996 koox baarayaal qaramada midoobay ihi ay golaha amaanka u gudbiyeen in la soo saaro sharci ka hortagaya sida sharci daradda ee badda Soomaliya looga kaluumaysanayo balse taas ay diideen wadamo ka tirsan golaha amaanka iyo tan saddexaad oo ah hadii sharci daro ku kaluumaysigu sii socdo in sanadka 2050 badda Soomaliya oo dhan laga waayi doono wax qayraad ah.
* Xilligii heshiiskii Caruusha Soomaaliya waxaa madaxweyne ka ahaa Cabdirashid Cali Sharmaarke oo madaxweyne ahaa June 10, 1967 � October 15, 1969.